साउन १ गते पछाडि आईएमईआई नम्बर दर्ता नगरेसम्म मोबाइल नचल्ने
असार २२, काठमाडौं । अवैध रुपमा नेपाल भित्रिएका वा विदेशबाट उपहारमा प्राप्त मोबाइलहरु साउन १ गते पछाडि आईएमईआई नम्बर दर्ता नगरेसम्म नचल्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । विदेशमा रहेका आफन्त वा साथीभाइले उतै किनेर नेपाल पठाइदिएका मोबाइलहरुको हकमा व्यक्ति स्वयंले आईएमईआई नम्बर दर्ता ग...
संसद विघटन मुद्दामा बहस सकियो, असार २८ गते अर्को पेशी
असार २१, काठमाडौं । सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस सकिएको छ । अब असार २८ गते संवैधानिक इजलास बस्नेछ । रिट निवेदक र विपक्षीको बहस अनि एमिकस क्युरीको राय सुनिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर असार २८ गतेका लागि पेशी तोकेका छन् ।
वायुसेवा सञ्चालकले बाढी पहिरोमा हवाई उडान थप्न गरे माग
असार २१, काठमाडौं । अविरल वर्षाको कारण सडक मार्ग अवरुद्ध भएको भन्दै हवाई उडान थप गर्न व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका छन् । निषेधाज्ञा खुलेपनि राष्ट्रिय राजमार्गहरु अहिले अवरुद्ध हुँदा हजारौं यात्रुको यात्रा राकिएको छ । तर सरकारले भने हवाई उडान ५० प्रतिशत मात्र हुने गरि तोकेको छ । अहिले तोकिए...
नेपालसहित विश्वका नेताहरुको सम्मेलन चीनले आयोजना गर्दै
असार २१, काठमाडौं । चीनले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको एक सयौं वर्षको अवसरमा नेपालसहित विश्वका राजनीतिक दलका नेताहरुको सम्मेलन आयोजना गर्दै छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव एवम् चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङले ‘वर्ल्ड पोलिटिकल पार्टी समिट’ नाम दिइएको सो सम्मेलनमा ‘कि न...
काठमाडौंबाट जापानको नारितामा तोकिएको नियमित उडान रद्द
असार २०, काठमाडौं । जारी महामारीका कारण काठमाडौंबाट जापानको नारितामा तोकिएको नियमित उडान रद्द भएको छ । नेपाल एयरलाइन्सले एक सूचना जारी गरी नारिता उडान रद्द भएको जानकारी दिएको छ । कम्पनीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अहिले जापानको नारितामा प्रतिउडानमात्र ६० जना यात्रु लैजान पाउने प्रावधान छ ।...
अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचनका लागि दियो ७ अर्ब ७२ करोड खर्चको सहमति
असार १८, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई रु. ७ अर्ब ७२ करोड ८३ लाख सम्म खर्च गर्ने गरी सहमति प्रदान गरेको छ । उक्त रकम प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७८ को सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि निर्वाचन सामग्री लगायत अन्य सामाग्रीहरु खरिद तथा निर्वाचन व...
बालुवाटारमा एमाले बैठक शुरु
असार १८, काठमडौं । बालुवाटारमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक शुरु भएको छ । दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज भएपछि एमालेको यो पहिलो बैठक हो । बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह आजको बैठकमा पनि अनुपस्थित भएको छ । बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने सहभागी छन् । माधव नेपाल...
१४ लाखमा गुल्मीको अर्जुन डाँडामा बन्यो ‘सेल्फी टावर’
असार १८, गुल्मी । रेसुङ्गा नगरपालिका-७ मा पर्ने अर्जुन डाँडोलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन र त्यहाँ पुग्ने आन्तरिक तथा बाहृय पर्यटकहरुलाई तम्घास बजारसहितको मनमोहक दृश्य ‘सेल्फी’ लिने गरी टावर निर्माण गरिएको छ । सेल्फी टावरका लागि भनेर लुम्बिनी प्रदेश सरकार उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयक...
पछिल्लो २४ घण्टामा ४०१७ जना संक्रमणमुक्त
असार १७, काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा ४०१७ जना कोरोना भाइरस संक्रमणमुक्त भएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा ७,१३० जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा १८५७ र ३८५५ जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा ९०३ जना गरी २७३० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा...
सधैंका लागि कालीगण्डकी डाइभर्सन बन्द गर्न आग्रह
असार १७, काठमाडौं । ‘कालीगण्डकी डाइभर्सन’ परियोजनाले गण्डकी सभ्यताको जैविक विविधता र मानवीय सभ्यतामा संकट निम्त्याउने भन्दै यसलाई सधैंका लागि रोक्न जनस्तरबाट माग गरिएको छ । ‘कालीगण्डकी बचाऔं अभियान’को तर्फबाट बिहिबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विनाशकारी परियोजना तत्काल...
फेरी बढ्यो मेलम्चीको बहाव, सतर्क रहन आग्रह
असार १७, काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकमा पर्ने मेलम्ची खोलाको बहाव बढेको छ । मेलम्चीमा यही असार १ र ५ गतेको बाढीले जोगाएको खोला किनारका घर तथा संरचना र खेतीयोग्य जमीनसमेत अहिलेको वर्षाले कटान गरिरहेको स्थानीय बताउँछन् । केही दिन अघिमात्र मेलम्चीको बाढीले ठूलो क्षति व्यहोरेका स्थानीयवासी फेरि...
सर्वोच्चमा संवैधानिक आयोगका २० पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्ध रिट दर्ता
असार १६, काठमाडौं । राष्ट्रपतिले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षसहितका पदाधिकारी र अरु संवैधानिक निकायका पदाधिकारी गरी २० जनालाई असार १० गते गरेको नियुक्तिलाई बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति सिफारिस भएका पदाधिकारीको...
विभिन्न स्थान र मितिमा लाफा रुङ्ग फाउन्डेसनद्वारा सहयोग हस्तान्तरण
असार १६, काठमाडौं । लाफा रुङ्ग फाउन्डेसनले मेलम्ची हेलम्बु तथा मनाङ्गका बाढिपिडित, तनहुको आगलागी पिडित, नवलपुरको एकल महिला, चेपाङ समुदाय र लकडाउन प्रभावित मजदुरलाई विभिन्न स्थान र मितिमा सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ । लाफा रुङ्ग फाउन्डेसनले हेलम्बुलाई जस्ता पाता (२५ बन्डल), म्याट्रेस र ब्ल्...
असार १५, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारी फैलन सक्ने आंशकाका बीच टर्कीले नेपालसहित ६ वटा मुलुकबाट हुने सिधा उडानमा सोमबारबाट रोक लगाएको छ । यूरोप र अमेरिकामा हुने नेपालीहरुको लागि यसले यात्रा समेत प्रभावित हुने भएको छ । अहिले टर्कीबाट काठमाडौंका लागि टर्किस एयरलाइन्सले सातामा दुई उडान गरि...
वातावरण संरक्षण परियोजनाको सहयोगमा सानिमदौले वृक्षारोपण गर्दै
असार १५, रामेछाप । वातावरण संरक्षण परियोजनाको सहयोगमा सानिमदौ सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले यस वर्ष पनि मन्थली आसपासको खाली भागमा वृक्षारोपण गर्न लागि परिरहेको छ । सानिमदौ सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई वातावरण संरक्षण परियोजनाले सानिमदौ वन उपभोक्ता समितिले गत वर्ष रोपिएको बिर...
असार १५, काठमाडौं । उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको सोमबारको निणर्य अनुसार ठीक दुई महीनापछि आजदेखि सार्वजनिक बस चल्न थालेका छन् । २५ भन्दा धेरै सिट भएका सार्वजनिक बस आजदेखि जोर-बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिने गरी एक सातालाई निषेधाज्ञा थप गर्ने निणर्य काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सिड...
उपत्यकामा कुन-कुन पसल कति बजेसम्म खोल्न पाउने ?
असार १४, काठमाडौं । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले उपभोग्य सामग्री र पाठ्यपुस्तकको पसल साँझ ६ बजेसम्म खुल्ने र हार्डवेयर, भाँडापसल, फेन्सीजस्ता पसल ११ बजेदेखि ६ बजेसम्म सञ्चालन हुन दिने निणर्य गरेको छ । खाद्यान्न, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, फलफूल, तरकारी, माछा,...
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा विपक्षीको बहस सुरु
असार १४, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमा विपक्षीको तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले बहस सुरु गरेका छन् । बडाललाई बहस गर्न तीन घण्टा समय दिइएको छ । रिटमा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको तर्फबाट बहस गर्नका लागि १५ घण्टाको समय छुट्याइएको छ । त्यसपछि थ...
पछिल्लो २४ घण्टामा थप १९२० जनामा संक्रमण
असार १३, काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा थप १९२० जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ भने ३४ जनाको मृत्यु भएको छ । ६००० जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा १३५३ र ३८३६ जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा ५६७ जना गरी १९२० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमध्ये...
एमालेले बोलायो दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक
असार १३, काठमाडौं । दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक नेकपा (एमाले)ले बोलाएको छ । आइतबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले असार १६ गते काठमाडौंमा बैठक बोलाएको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए । ज्ञवालीका अनुसार बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक स्थिति र राष्ट्रिय राजनीतिका आयामबारे छलफल गरिएको थिय...